अध्याय ६८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरो वचनलाई हरेक देश, ठाउँ, राष्ट्र र सम्प्रदायमा लागू गरिँदैछ, र यो कुनै पनि तोकिएको समयमा हरेक कुनामा पूरा भइरहेको छ। हरेक ठाउँमा हुने विपदहरू मानिसहरूबीचको लडाइँ होइनन्, न त ती हतियारहरूद्वारा लडिने युद्ध नै हुन्। त्यसपछि, युद्धहरू हुनेछैनन्। सबै मेरो पकडभित्र छन्। सबैले मेरो न्यायको सामना गर्छन् र तिनीहरू विपत्तिमा शिथिल हुन्छन्। जो मेरो विरोध गर्छन्, साथै जो मसँग सहकार्य गर्न पहल गर्दैनन्, उनीहरूले विभिन्न विपदको पीडा झेलून्; उनीहरू रोऊन् र सधैँको लागि अँध्यारोमा रहेर अनन्तकालसम्म दाह्रा किटून्। उनीहरू बाँच्दैनन्। म सोझो हिसाबले र स्फूर्तिसाथ काम गर्छु, र विगतमा तँ मप्रति कति बफादार थिइस् त्यस कुरामा कुनै ध्यान दिन्‍नँ; जबसम्म तँ मेरो विरोध गर्छस्, मेरो न्यायको हातले तँमाथि कुनै विलम्ब नगरी—एक सेकेन्ड पनि होइन—कुनै कृपा नराखी तेज रूपमा क्रोध बर्साउनेछ। मैले सबैलाई भन्दै आइरहेको छु कि म आफ्नो वचन पूरा गर्ने परमेश्‍वर हुँ। मैले बोल्ने हरेक वचन पूरा गरिनेछ, र म तिमीहरूलाई ती प्रत्येक वचन पूरा भएको देखाउनेछु। हरेक कुरामा वास्तविकता प्रवेश गराउनुको अर्थ यही हो।
ठूला विपदहरू पक्कै पनि मेरा सन्तान, मेरो प्रियजनहरूमाथि बज्रँदैनन्; म हरेक क्षण र हरेक सेकेन्ड मेरा सन्तानको हेरचाह गर्नेछु। तिमीहरूले पक्कै पनि यस प्रकारको कष्ट र पीडा सहनुपर्नेछैन। यसको साटो, मुख्य कुरा भनेको मैले मेरा सन्तानलाई सिद्ध पार्नु हो, र उनीहरूमा मेरो वचन पूरा गर्नु हो। परिणामस्वरूप, तिमीहरूले मेरो सर्वशक्तिमान्‌तालाई पहिचान गर्न सक्‍नेछौ, जीवनमा अगाडि बढ्न सक्‍नेछौ, मेरो लागि चाँडै आफ्नो काँधमा बोझ थाप्नेछौ, र मेरो व्यवस्थापन योजना पूरा गर्नेतर्फ आफूलाई पूर्णरूपमा समर्पण गर्नेछौ। यसले गर्दा तिमीहरू प्रसन्नता र खुसीसाथ आनन्दित हुनुपर्छ। म तिमीहरूलाई सबै कुरा सुम्पनेछु, तिमीहरूलाई नियन्त्रण गर्न दिनेछु; म यो तिमीहरूको हातमा राख्नेछु। यदि एउटा छोराले आफ्नो पिताका सबै सम्पत्तिको उत्तराधिकार पाउँछ भन्ने कुरा सत्य हो भने, मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू, तिमीहरूका लागि यो झन् कति सत्य होला? तिमीहरू वास्तवमा धन्य हौ। ठूला विपदहरूबाट पीडित हुनुको साटो तिमीले सधैँको लागि आनन्द लिनेछौ। कस्तो महिमा! कस्तो महिमा!
आफ्नो गति बढाऊ, र हरेक ठाउँमा हरेक समय मेरा पाइलाहरूलाई पछ्याऊ; पछाडि नपर। तिमीहरूको हृदयले मेरो हृदयलाई पछ्याऊन्, र तिमीहरूको मनले मेरो मनलाई पछ्याऊन्। मसँग सहकार्य गर, अनि हृदय र मनमा एक बन। मसँग खाऊ, मसँग बस, र मसँग आनन्द मनाऊ। आनन्द लिन र प्राप्त गर्न तिमीहरूका लागि अद्भुत आशिषहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो अतुलनीय प्रशस्तता मभित्र विद्यमान छ। यसको थोरै भाग पनि अरू कसैको लागि तयार गरिएको छैन; म यो पूर्णरूपमा मेरा सन्तानको लागि गर्छु।
वर्तमानमा, मेरो मनमा जे छ त्यो पूरा हुनेछ। मैले तिमीहरूसँग कुरा गरिसक्ने बेलासम्म ती कुरा पहिले नै पूरा भइसकेका हुनेछन्। काम वास्तवमा त्यति छिटो अघि बढ्छ र हरेक पल यो बदलिरहन्छ। यदि तिमीहरूको ध्यान एक पलको लागि मात्र पनि भड्किन्छ भने, “केन्द्रबाट बाहिरिने” घटना हुनेछ, र तिमीहरूलाई धेरै पर फ्यालिनेछ, यसरी तिमी यो प्रवाहबाट बाहिर जानेछौ। यदि तिमीहरूले मनैदेखि खोज्दैनौ भने, तिमीले मेरो कष्टपूर्ण प्रयासलाई खेर जाने बनाउनेछौ। भविष्यमा विभिन्न मुलुकका मानिसहरूले कुनै पनि समय भीड गर्नेछन्: के तिमीहरूले आफ्नो हालको स्तरमा उनीहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्नेछौ? म मेरो आज्ञा पूरा गर्न यो छोटो समयावधि भित्रै राम्रा सिपाहीहरू बन्न म तिमीहरूलाई पूर्ण रूपमा तालिम दिनेछु। तिमीहरूले सबै पक्षमा मेरो नाम महिमित तुल्याऊ, र मेरो लागि अद्भुत गवाहीहरू बन भन्ने म चाहन्छु। जसले उनीहरूलाई तिरस्कार गरेका थिए, तिनीहरूलाई नै नेतृत्व गर्न र उनीहरूमाथि शासन गर्नका लागि उनीहरू उनीहरूभन्दा माथि खडा होऊन्। के तिमीहरूले मेरा अभिप्रायहरू बुझ्‍छौ? के तिमीहरूले मैले गरेका कष्टपूर्ण प्रयासहरूलाई महसुस गरेका छौ? म यी सबै तिमीहरूको लागि गर्छु। यो केवल तिमीहरू मेरो आशिषहरूको आनन्द लिन सक्षम छौ वा छैनौ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
म, परमेश्‍वर जो मानवको मन र हृदय खोजी गर्दछु, पृथ्वीको अन्तसम्म यात्रा गर्छु। कसले मेरो लागि सेवा गर्ने हिम्मत गर्दैन? सबै मुलुकबीचको तनाव धेरै उच्च छ, र उनीहरू तिक्‍ततापूर्ण तरिकाले संघर्ष गर्दछन्; तथापि अन्तमा उनीहरू मेरो पकडबाट भाग्न सक्दैनन्। म पक्कै पनि उनीहरूलाई सजिलै छोड्नेछैनँ। म उनीहरूलाई उनीहरूको कार्य, सांसारिक हैसियत र सांसारिक सुखभोगअनुसार नै एक-एक गरी न्यायको कसीमा ल्याउनेछु। म कसैलाई पनि छोड्नेछैनँ। मेरो क्रोध प्रकट हुन सुरु भएको छ, र यी सबै उनीहरूमाथि बर्सिनेछन्। सबै एक-एक गरी उनीहरूमा नै पूरा हुनेछन्, र उनीहरूले नै यी सबै उनीहरूमाथि ल्याएका हुनेछन्। जो मानिसहरू मेरो बारेमा जान्न असफल भए वा विगतमा मलाई घृणा गर्थे, तिनीहरूले अब मेरो न्यायको सामना गर्नेछन्। जसले मेरा सन्तानलाई सताएका छन्, म उनीहरूलाई उनीहरूको विगतको बोली र कार्यहरूको लागि खास सजाय दिनेछु। म बच्चाहरूलाई पनि छोड्नेछैनँ; यी सबै मानिस शैतानका दूत हुन्। उनीहरूले केही नभने व नगरे पनि, यदि उनीहरूले भित्र मनमा मेरा सन्तानका लागि घृणा पाल्छन् भने, म उनीहरूमध्ये एउटालाई पनि छोड्नेछैनँ। म उनीहरू सबैलाई देखाउनेछु कि हामी—मानिसहरूको यो समूहले नै—आज शासन गर्छौं र सत्तामा पकड राख्छौं; यी पक्कै पनि उनीहरू होइनन्। यस कारणले, यो अझै धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तिमीहरूले मेरो लागि आफ्नो पूरै शक्ति समर्पित गर र आफूलाई मनैदेखि अर्पण गर, ताकि तिमीहरूले हरेक ठाउँ, कुना, धर्म र सम्प्रदायमा मेरो नामलाई महिमित गर्न सक र मेरो नामको गवाही दिन सक, अनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र पृथ्वीको पल्‍लो छेउसम्म यसलाई फैलाउन सक!
अघिल्लो: अध्याय ६७
अर्को: अध्याय ६९